Grimme UK Kumaka 10 Kuonekwa kuDriffield Show Nekuisa Iyo Inotaridzika PaHarvesteye & Haith-boka - Potatoes News
Vashanyi kuDriffield Show yegore rino vanozove vekutanga kuona zvigadzirwa zvechizvino-zvino kuhurongwa hwechimurenga hunoverengera nekukura mbatatisi panguva yekukohwa kana pavanenge vachiisa mbatatisi muchitoro.
Driffield Ratidza 2019
GRIMME UK ichange ichienda pachiitiko chayo chekutanga mukati kwerinopfuura gore uye ichave ichiratidzira yazvino vhezheni yeHarvestEye TM, iyo patent tekinoroji yakagadzirwa pamwe chete neB-Hive Innovations.
Yakatangwa kuBritish Potato mu2019, HarvestEye inoshandisa 3D kamera uye muchina kudzidza kuverenga, kukura uye kuongorora kusiana kwechirimwa kana chaikohwa.
Vashanyi kuGRIMME UK's stand (# 180) ichaunzwa kune itsva 3D kamera yakave yakabatanidzwa mune yazvino system yekuvandudza, ichipa yakatonyanya kurongeka. HarvestEye yakagadziridza zvakare Hardware uye wiring mune ino system, iyo inogona nyore kudzoreredzwa kune yekukohwa masisitimu kubvumidza varimi kuti vaone kuzere kwekuti mashandiro ezvirimwa anosiyana sei muminda yavo yese.
"HarvestEye inobvumira vashandisi kuvandudza mashandiro ezvirimwa uye kudzoka kweminda," anodaro Ed Hodson, Potato Chigadzirwa Nyanzvi kuGRIMME UK. “Tekinoroji iyi iri nyore kuisa uye inobatsira vashandisi kuronga bhizinesi ravo zvine mutsindo, kubvisa marara mune zvekutengesa nekugadzirisa kudzoka kwezvirimwa. "Tiri kutarisira chaizvo kugashira vanhu panzvimbo yedu uye nekuvaratidza zvigadziridzo zvichangobva kuwedzerwa neHarvestEye pachikuva."
Inovandudza tekinoroji yekuona inoona midzi yezvirimwa painokohwewa; kuyera saizi, kuverenga uye kusiyanisa.
HarvestEye ™ tekinoroji yeUK yakapihwa patent iyo inopa ruzivo pamusoro pehukuru, kuverenga uye kusiana kwezvirimwa pamapatata asina kugezwa sezvavanokohwa. Iyo yakasanganiswa data analytics inoratidza chaizvo izvo zviri kusimudzwa uye kubva kupi kuri mumunda. Kupa ruzivo rwakakura rwemunda pane zvakajairwa sampling: iyi njere inobatsira kuwedzera goho rinotengeswa uye kudzikisira kusaenzana kwezvirimwa.HarvestEye tekinoroji isingakuvadze iyo inoyera nemazvo saizi, kuverenga uye kusiyanisa kwezvirimwa, ichipa ruzivo rwekukurumidza pane goho rinotengeswa zvinoreva kuti iwe unogona kuwana mutengo wakanyanya kukohwa kwako.
Zvinhu Zvakakosha -
Yakabatanidzwa kamera tekinoroji neakaomesesa komputa algorithms
Inogona kudzoreredzwa kune aripo mucheki masisitimu
Rarama hupenyu panguva yekukohwa sezvo goho rinosimudzwa kubva mumunda
Hapana chinodikanwa chekuwedzera maitiro kureva kuwacha
Kutanga tekinoroji yezviitiko zvinonakidza zvemberi
Sechigadzirwa chebhizimusi HarvestEye ™ ichagadzirwa nekutsigirwa neHarvestEye Ltd. Kurongeka kwekudyidzana kwakasarudzika kunoita kuti GRIMME ive yega mugove weUK kuHarvestEye ™ kune vese vatsva nevekare variko uye varimi vekurima.
Zvakare nekuwedzera kutsva kuHarvestEye, GRIMME UK ichave nemimwe michina inotungamira mukirasi pachiratidziro, kusanganisira Varitron 220, GB230 bhandi rembatatisi, GH2 mitsara miviri yekukwirisa hiller, michina yemadiridziro uye nyowani yeStanhay X Series .
Nekuda kwedenda iri, Driffield Show yegore rino ichavewo kekutanga GRIMME UK kuratidzira padivi peHaith Group. Iwo makambani maviri akapinda mukudyidzana kwakabatana muna Kubvumbi 2020 kuti vape mhinduro dzakakwana kubva pakudyara kusvika pakukohwa, kuwacha, kukora uye kurongedza. GRIMME UK ichaita akati wandei maHaith ekuvandudzwa kwazvino pachigadziko.
“Takatanga kuoneka kuDriffield Show muna 2010, uye nekuti chirongwa chegore rapera chakamiswa, ino ichave nguva yegumi yataratidza. Tinoziva kuti chirongwa chegore rino chichava chakasiyana nezvakaitika, asi tinofara nekudzoka kuzosangana nevanhu takatarisana, tichitaura navo nezvemapurazi avo nekuvaratidza zvitsva zvinowedzerwa pamutambo wedu, ”anowedzera Tom Goose, GRIMME's UK Sales Manager.
Driffield Show inoitika kuDriffield Showground musi wa21 na22 Chikunguru.
Kuti uwane zvimwe nezve GRIMME UK, kubatana kwayo naHaith naHarvestEye, shanya https://www.grimme.com/uk
Grimme UK yekumaka chegumi kutaridzika kudriffield show nekuisa iyo yekutarisisa paHarvesteye neHaith boka
/ zviitiko-uye-kuratidzira /
Tags: Driffield kuratidzashataHarvestEye ™kudiridza hurongwaakangwara zvekurima
Potato Europe 2021 - sangano rinoisa kumira
Mari yaGwayana Weston inodonhedza 41% kusvika $ 66 mln
McCain Foods USA subsidiary inozivisa kuvharwa kweMonroe, NC chinokwezva chirimwa